သတင္းမ်ား Archives - Latest Myanmar News
မြန်မာစာ ဆရာဦးရဲဝေ ကွယ်လွန်
July 16, 2021 by Latest Myanmar News
လေးစားခဲ့ရသောမြန်မာစာပညာရှင်ဆရာကြီးဦးရဲဝေ ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြန်ပါပြီကော ကျွန်မ(၁၀)တန်းကတည်းက ဆရာ့စာအုပ်တွေနဲ့ လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ် လုပ်ငန်းခွင်သင်ကြားရေးဝင်တော့လည်း ဆရာ့စာအုပ်တွေက ကျမအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သလို ကလေးတွေကိုလည်း အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ထူးချွန်ထက်မြက်သော တပည့်ပေါင်းများစွာကိုဆရာမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပီမို့ လောကကြီးအတွက် တာဝန်ကျေခဲ့ပါပီဆရာကြီးရေ မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝမှာ အေးချမ်းပါစေ ကာင်းရာသုဂတိလားပါစေဆရာကြီးရေ တပည့်များစွာထဲမှတစ်ဦး Daw Pann Ei Ko Ko Zawgyi ေလးစားခဲ့ရေသာျမန္မာစာပညာရွင္ဆရာႀကီးဦးရဲေဝ ေႂကြလြင့္ခဲ့ရျပန္ပါၿပီေကာ ကၽြန္မ(၁၀)တန္းကတည္းက ဆရာ့စာအုပ္ေတြနဲ႔ ေလ့လာသင္ယူခဲ့တယ္ လုပ္ငန္းခြင္သင္ၾကားေရးဝင္ေတာ့လည္း ဆရာ့စာအုပ္ေတြက က်မအတြက္အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သလို ကေလးေတြကိုလည္း အေကာင္းဆုံးကူညီပံ့ပိုးေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာကိုဆရာေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပီမို႔ ေလာကႀကီးအတြက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ပါပီဆရာႀကီးေရ ျမင့္ျမတ္ေသာဘုံဘဝမွာ ေအးခ်မ္းပါေစ ကာင္းရာသုဂတိလားပါေစဆရာႀကီးေရ တပည့္မ်ားစြာထဲမွတစ္ဦး Daw Pann Ei Ko Ko
Categories သတင္းမ်ား Leaveacomment
၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘာနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော ဥက္ကာခဲ
၂၀၂၁ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ မှာ ကမ္ဘာနှင့် ထိတွေ့နိုင်သော ဥက္ကာခဲ ကမ္ဘာကို ထိတွေ့ဝင်ရောက်လာနိုင်မယ့် ဥက္ကာခဲတစ်ခုကို နာဆာမှ ၂၀၂၁ ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2021 PDC လို့ အမှတ်စဉ်ပေးထားပြီး သူဟာ လာမယ့် ၆ လ အတွင်း (အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်) လောက်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ တိုက်မိနိုင်ချေ ၁:၂၅၀၀ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းသုံးသပ်ရပါတယ်။ ဥက္ကာခဲတွေဟာ မှောင်မိုက်တဲ့ အာကာသလွင်ပြင်ထဲမှာ လွင့်မျောနေကြတဲ့ အလင်းပိတ်အရာဝတ္ထုများဖြစ်လို့ သူတို့ကို တွေ့ရှိထောက်လှမ်းဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်။ ယခုတွေ့ရှိထားတဲ့ ဥက္ကာခဲကိုလည်း အရွယ်အစားအတိအကျပြောဖို့ ခက်နေပါသေးတယ်။ ခန့်မှန်းချေ ၃၅ မီတာ (၁၁၅ ပေ) မှ မီတာ … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags ဥက္ကာခဲ
ဘားအံတက္ကသိုလ် ပတ္တမြားနယ်မြေက ပုံပြင်လား ရာဇဝင်လား
March 17, 2021 by Latest Myanmar News
” ပုံပြင်လား ရာဇဝင်လား ” ၁၆.၃. ၂၀၂၁ ဘားအံတက္ကသိုလ် ပတ္တမြားနယ်မြေ။ CDM ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်၁၂ နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး အဆောင်မှ ဖယ်ပေးရမယ်တဲ့။ နံနက် ၉ နာရီလောက်မှာ အကြောင်းကြားလာ။ ခြံထဲ ရောက်နေတော့ မိန်းမဆီ ဖုန်းဆက်။ အထုပ်အပိုးပြင်ပေါ့။ အိမ်ကလည်းအပြီးမဆောက်နိုင်သေးတော့ နေလို့မရသေး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က တပည့်မကြီး ‘မလှ’ ထံ ဖုန်းဆက်။ အခြားတပည့်များ မိတ်ဆွေများထံလည်းဖုန်းဆက်။ ‘အမေဇင်’ ‘အားအား’ ‘ပိုင်မှူး’တို့ရောက်လာ။ အထုပ်အပိုးဝိုင်းသိမ်း။ မအင်ကြင်းသန်းလှိုင်နဲ့ဆောင်ထီ့ခလိန်းသန်းလှိုင် သားအမိ ‘အမေဇင်’ တို့အိမ် အထုပ်အပိုးတွေနဲ့လိုက်သွား။ မိန်းမ ခြံထဲလိုက်လာ။ ၁၀ နာရီ ၂၀ မိနစ် ဆုတ်ခွာနိုင်။ မပြီးသေးတဲ့ အိမ်ရဲ့ မီးဖိုခန်းထဲမှာလင်မယားနှစ်ယောက် ဖြစ်သလို ထမင်းစားကြ။ မေ့မရနိုင်တဲ့ … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags ဘားအံ
R2P အမြန်ဆုံး ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သော နိုင်ငံ များ စာရင်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လာ
March 16, 2021 by Latest Myanmar News
R2P အမြန်ဆုံး ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်သော နိုင်ငံ များ စာရင်းGlobal R2P ဌာန ကြီး က ထုတ်ပြန် မြန်မာနိုင်ငံက red alert ထဲ ပါဝင်နေပါတယ် March 15,2021 မြန်မာ စံတော်ချိန် 1:32 AM မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် #R2P Monitor Issue 56 🔴#Afghanistan, 🔴#Cameroon, 🔴#CentralSahel, 🔴#China, 🔴#DRC, 🔴#Ethiopia, 🔴#Myanmar (#Burma), 🔴#Syria, 🔴#Venezuela, 🔴#Yemen, 🟡#CARcrisis, 🟡#Mozambique, 🟡#Nigeria, 🟡#SouthSudan & 🟡#Sudan. ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ICJ မှာ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံ က … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags မြန်မာ
မွေးကတည်းက ဒီချိန်ထိ မမြင်ဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ကန်တော်ကြီး လက်ရှိအခြေအနေ
မွေးကတည်းက ဒီချိန်ထ်ိ မမြင်ဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင် ကန်တော်ကြီး အခြေအနေ ပြင်ဦးလွင် အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်အတွင်း ရေခမ်းခြောက်ပြီး မြေကြီးများ ကွဲအက်( 16.3.2021 ) ပြင်ဦးလွင်မြို့၏ အထင်ကရတခုဖြစ်သည့် အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်အတွင်း ရေများ ခမ်းခြောက်ပြီး မြေသားများအထိ ကွဲအက်နေကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်အတွင်း ရေခမ်းခြောက်မှုများအဖြစ် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက (၂)ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သလို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းတွင်လည်း (၁)ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးကြောင်းကို ရေစတင်ခမ်းလာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားကန်တော်ကြီးယျာဉ်က ဇန်နဝါရီလ(၁၄)ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားရှိသည်။ အဆိုပါ ကန်အတွင်း ယနေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ(၁၆)ရက်နေ့အထိ ရေများခမ်းခြောက်ပြီး မြေသားများ ကွဲအက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေလျှက်သည်။ ၁၉၂၄ခုနှစ်က စတင်ကာ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်၏ ဧရိယာသည် ၄၃၆ ဒသမ ၉၆ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ရေပြင်ဧရိယာမှာ ဧက(၇၀)ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags ပြင်ဦးလွင်
Wifi မရရင် တော့ရင် ဒါတွေလုပ်ပါ
March 15, 2021 by Latest Myanmar News
Wifi မရရင် ဘာလုပ်မလဲ ‼️ ဖုန်းအင်တာနက်တွေလည်း ဖျက်ထားပြီး မကြာသေးခင် wifi ဖျက်မယ်လို့လည်းကြားရပါတယ်။ ကောလဟလ ဖြစ်စေ အမှန်ဖြစ်စေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါ။ အမှန် တကယ် Wifi မရခဲ့ရင် video record ယူပါ။ Video ကို Horizontal အလျားလိုက်ရိုက်ပါ။ record ယူရင်း စကားပြောဖို့အခွင့်သာခဲ့ရင် ဘယ်ရက် ,ဘယ် အချိန် ,ဘယ်သူတွေက်ို ဘာလုပ်နေပါတယ်လို့ ပြောပေးပါ။ စကားပြောဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ရင် အသေအချာ အချိန် ,နေရာ,ဖြစ်ရပ်တွေကို မှတ်သားထားပြီး internet ပြန်ရချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ media တွေဆီ ရောက်အောင်ပို့ပါ။ CCTV ရှိတဲ့သူများလည်း CCTV ဖွင့်ထားကြပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်မည်ဆိုပါက effect တွေ မထည့်ပဲ original cameraနဲ့သာရိုက်ပါ။ … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags Wifi
March 13, 2021 by Latest Myanmar News
အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားရင် ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့သားသမီးများအတွက် ပညာရေးအထောက်အပံ့များပေးမယ့် ခိုင်သင်းကြည် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲမင်းသမီးချောခိုင်သင်းကြည်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ခိုင်သင်းကြည်ကတော့လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့မင်းသမီးခိုင်သင်းကြည်ကလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့သားမီးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာကိုအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ ခိုင်သင်းကြည်ကအခုလည်းအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားရင်ကြွေလွင့်သွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့သားသမီးများအတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကိုကူညီလှူဒါန်းပေးမယ့်အကြောင်းခုလိုရေးသားဝေမျှလာပါတယ်။ ကတိပေးပါတယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာရေးကို lifelong support လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်မြင်မိပါတယ်။ အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားရင်ကျွန်မရဲ့ဝင်ငွေထဲကနေလစဉ်လှူဒါန်းဖို့ကတိပြုပါတယ် သူတို့အနာဂတ်တွေမပျက်စေဖို့ဝိုင်းဝန်းကြမယ်နော်စာလေးပဲဖြစ်ရာလေးစားလွန်းတာကြောင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ Zawgyi အေျခအေနေတြတည္ၿငိမ္သြားရင္ က်ဆုံးသြားတဲ့သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးမယ့္ ခိုင္သင္းၾကည္ ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္အားေပးရတဲမင္းသမီးေခ်ာခိုင္သင္းၾကည္ကေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထိပ္တန္းမင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုေတြလည္းသိမ္းပိုက္ရရွိထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ခိုင္သင္းၾကည္ကေတာ့လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ျပည္သူနဲ႔တစ္သားတည္းရပ္တည္ေနတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့မင္းသမီးခိုင္သင္းၾကည္ကလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာက်ဆုံးသြားတဲ့သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕သားမီးေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာကိုအခုလိုေျပာျပလာပါတယ္။ ခိုင္သင္းၾကည္ကအခုလည္းအေျခအေနေတြတည္ၿငိမ္သြားရင္ေႂကြလြင့္သြားတဲ့သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕သားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေပးမႈေတြကိုကူညီလႉဒါန္းေပးမယ့္အေၾကာင္းခုလိုေရးသားေဝမွ်လာပါတယ္။ ကတိေပးပါတယ္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲမွာက်ဆုံးသြားတဲ့သူေတြရဲ႕သားသမီးေတြပညာေရးကို lifelong support လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္ျမင္မိပါတယ္။ အေျခအေနေတြတည္ၿငိမ္သြားရင္ကြၽန္မရဲ႕ဝင္ေငြထဲကေနလစဥ္လႉဒါန္းဖို႔ကတိျပဳပါတယ္ သူတို႔အနာဂတ္ေတြမပ်က္ေစဖို႔ဝိုင္းဝန္းၾကမယ္ေနာ္စာေလးပဲျဖစ္ရာေလးစားလြန္းတာေၾကာင့္ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။
Categories သတင္းမ်ား Tags ခိုင်သင်းကြည်
တောင်ကိုရီးယားက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးတဲ့ projectလေး
March 10, 2021 by Latest Myanmar News
တောင်ကိုရီးယားက မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးတဲ့ projectလေးပါ.. “မင်္ဂလာပါ ကော်ဖီ”ပါတဲ့…. မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီဖို့အတွက် သီးသန့်ထုတ်ပြီးလှူထားတဲ့ ကော်ဖီပါ… အခုချိန်ထိတော့ ကော်ဖီအထုပ်၁၀၀၀ ထုတ်လုပ်လှူဒါန်းရောင်းချနေပါပြီ။ အဲ့ဒီကော်ဖီကိုဝယ်သောက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံပြီးသားဖြစ်မှာပါ.. အခုချိန်အထိ “မင်္ဂလာပါ ကော်ဖီ”ရောင်းချ လို့ရတဲ့ ငွေစုစုပေါင်း ဝမ်14,171,000 အထိ ကိုရရှိနေပါပြီ..တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ CDM အတွက်နဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ကော်ဖီရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေကို လှူဒါန်းပေးမှာပါ…တဲ့. ကျေးဇူးပါယောက္ခမပြည်သူတွေရေ..😭🙏🏻 JiHyo ဘယ်လောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယောက္ခမမြေလည်းဆိုတာသာကြည့်တော့ Zawgyi ေတာင္ကိုရီးယားက ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေပးတဲ့ projectေလးပါ.. “မဂၤလာပါ ေကာ္ဖီ”ပါတဲ့…. ျမန္မာျပည္သူေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ သီးသန္႔ထုတ္ၿပီးလႉထားတဲ့ ေကာ္ဖီပါ… အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေကာ္ဖီအထုပ္၁၀၀၀ ထုတ္လုပ္လႉဒါန္းေရာင္းခ်ေနပါၿပီ။ အဲ့ဒီေကာ္ဖီကိုဝယ္ေသာက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ မွာရွိတဲ့ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံၿပီးသားျဖစ္မွာပါ.. အခုခ်ိန္အထိ “မဂၤလာပါ … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags တောင်ကိုရီးယား
CDM လုပ်နေသည့် ထွေအုပ်ဝန်ထမ်း ၁၄ဦး တာဝန်ရပ်ဆိုင်းခံကြရ
February 23, 2021 by Latest Myanmar News
CDM လုပ်ဆောင်သည့် ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦးကို တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းခံကြရ ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက ( Civil Disobedience Movement ) CDM လုပ်ဆောင်သည့် ဝန်ထမ်း ၁၄ ဦးကို တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဖရူဆိုမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အမျိုးသား ရ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ရ ဦးတို့ကို CDM ၌ ပါဝင်သဖြင့် တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်လိုက်ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်မြင့်ထွန်း လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကယားပြည်နယ် ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီမှတချို့သော ဝန်ထမ်းများသည် စစ်အာဏာရှင် အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်လျက်ရှိကာ လတ်တလော တွင် … Read more
CRPH ရဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးသံတမန်ဖြစ်လာသော ဒေါက်တာဆာဆာအကြောင်း အလွန်စိတ်ဝင်စားလေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဒီသူရဲကောင်းလူငယ်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုနဲ့သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်စွန်းတစ်စကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒေါက်တာဆာဆာဖြစ်မည့် တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာ ရေချိုးဖူးတဲ့ လိုင်းလင်းပီရွာက ကလေးလေးကိုလည်း ဒေါက်တာဖြစ်မည်လို့ သူ့အဖေက ပြောတုန်းက ရွာကလူတွေက သူ့ကို အရူးလို့ ထင်ပြီး ဝိုင်းကြည့်ဖူးတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ ဒေသတစ်ခုမှာ ပညာတတ်တွေရှိလား။ ရှိရင် အဲဒီနေရာရဲ့ အနာဂါတ်ကို သွားပြီး ဟောကိန်းမထုတ်လေနဲ့။ ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒေါက်တာဆာဆာ လေသံအတိုင်း ယူပြောရရင် “The greatest gift we can give to the younger generation is education. They will be able to do so many … Read more
Categories သတင္းမ်ား Tags ဒေါက်တာဆာဆာ